नेपाल र बंगलादेश बीचको फु टबल खेल सुरु ! लाइभ भिडियो हेर्नुहोस्… – Ap Nepal
नेपाल र बंगलादेश बीचको फु टबल खेल सुरु ! लाइभ भिडियो हेर्नुहोस्…
काठमाडौं । नेपाल र बंगलादेशबीचको खेल सुरु भएको छ । त्रिदेशीय नेसन्स कप फुटबल अन्तर्गत साढे पाँच बजेदेखि बंगलादेश र नेपालबीचको खेल सुरु भएको हो । बंगलादेशविरुद्धको खेलमा अन्जन बिष्ट र अभिषेक रिजालले फरवार्डको जिम्मेवारी सम्हालेका छन् । प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जनले अभिषेक र अन्जनलाई आक्रमणको जिम्मेवारी दिएका हुन् ।
यस्तै मिडफिल्डमा त्रिदेव गुरुङ, सन्जोग राई, रवि पाश्वान र तेज तामाङ छन् । रक्षापंक्तीमा भने अनुभवी डिफेन्डर रोहित चन्दका साथै अनन्त तामाङ, रञ्जित धिमाल र दिनेश राजबंशी छन् । कप्तान किरण गुरुङ गोलकिपरमा छन् ।
आजको खेलबाट त्रिदेव गुरुङ र सन्जोग राईले पहिलो अन्तराष्ट्रिय खेल खेल्न लागेका हुन् । यसअघि यही टिमले किर्गिस्तानविरुद्ध खेलेको थियो । बंगलादेशले भने सबै नयाँ खेलाडी नेपालविरुद्ध उतारेको छ । बंगलादेशले पहिलो खेलमा किर्गिस्तानलाई १-० गोलले हराउँदा नेपालले भने गोलरहित बराबरी खेलेको थियो ।
Prevनेपाली चेली र भारतिय युवा बिच यस्तो प्रेम – पहिलो भेटमै माया बस्यो १६ जना जन्ती लिएर बिहे गर्न आए-यति रमाइलो कुराकानी (भिडियो सहित)
Nextबिवाह पछी गायिका अन्जु पन्त र थीर एकसाथ मिडियामा , यसरी बताए आफ्नो प्रेम काहानी (भिडियो)
मेयर बालेन्द्र साहको योजनालाई सफल बनाउन बुटवलबाट आयो खु:शिको खबर
“यदि शेर बहादुर प्र’धानमन्त्री भए भने कान का’ट्छु” भनेका दिपेन्द्रले अन्त’र्वार्तामै यसरी काटिदिए कान-हेर्नुहोस् (भिडियो सहित )
बलिउडलाई टक्कर दिने नेपालीको भिडियो ‘सिक्किम जाने रेल’ !-हेर्नुहोस (भिडियो सहित) (38793)